8 qof oo weerar lagu dilay gudaha dalka Jarmalka & ninkii geystay falkaasi oo meydkiisa la helay | HalQaran.com
Home Jarmalka 8 qof oo weerar lagu dilay gudaha dalka Jarmalka & ninkii geystay...
8 qof oo weerar lagu dilay gudaha dalka Jarmalka & ninkii geystay falkaasi oo meydkiisa la helay
Berlin (Halqaran.com) – Nin hubeysan oo la sheegay inuu ahaa cunsuri ayaa 9 ruux ku toogtay magaallo ku taalla galbeedka dalka Jarmalka, kaddib markii uu rasaas ku furay goob lagu cabo shiishadda.
Toogashadan ayaa dhacday abaaro 22:00 PM xilliga dalka Jarmalka, sida uu sheegay booliska Jarmalka. Waxaa sidoo kale weerarkaasi ku dhaawacmay dhowr qof oo kale.
Qofka looga shakisanyahay in uu falkani geystay ayaa goor dambe meydkiisa laga helay isla gurigiisa oo uu wehliyo meydka qof labaad.
Wargeyska ka soo baxay dalka Jarmalka ee Bild ayaa qoray in la tuhunsanaha uu ahaa qof dhalashadiisu tahay Jarmal, islamarkaana watay hub sharciyeysan
Sidoo kale, wargeyska ayaa sheegay, in ninkaasi baaritaan kaddib gaarigiisa laga helay hub kale.
Waxaa sanadihii dambe dalka Jarmalka ka dhacayay falal argagixiso ah balse waxaa jiray falal kale oo loo maleeyay argagixiso balse baaritaan kaddib waxaa la ogaaday in ay ahaayeen falal dambiyeedyo horey u qorsheysanaa.
8 qof oo weerar lagu dilay gudaha dalka Jarmalka